Aniga oo (13 sanno jir ah) waxaan dhiig ku arkay kastuumadayda hoosteeda. Miyaan Xanuunsanahay? – Tips for refugees
Previous Previous post: Sideen ku oggaan karaa haddii aan qabbo fayraska HIV?
Next Next post: Waxaa la igu leeyahay dayn aad u baddan midaas oo aan galay safarkaygii aan waddankaan usoo socday. Waxaa la iga rabaa in aan shaqeeyo waana cabsanayaa. Qofkee i caawin kara?